Mofon’aina – Alarobia 17 Jona 2015 – Athis Fanantenana
Lasin’ny Fifohazana Anio
Katekomena 22 jolay
Mofon’aina – Alarobia 17 Jona 2015
12 Fa aiza kosa no hahitana ny fahendrena? ary aiza no fitoeran’ ny fahalalana?13 Tsy misy zanak’ olombelona mahalala ny vidiny, ary tsy hita eo amin’ ny tanin’ ny velona izy.14 Hoy ny lalina: Tsy ato anatiko izy; Ary, tsy ato amiko izy, hoy ny ranomasina.15 Ny volamena tsara tsy mahatakalo azy, ary ny volafotsy tsy azo lanjaina ho vidiny;16 Ny volamena avy any Ofira tsy ampy ho tombany, na ny beryla saro-bidy sy ny safira aza.17 Ny volamena sy ny fitaratra tsy azo ampitahaina aminy, ary tsy azo takalozana firavaka tena volamena izy.18 Tsy tokony hotsaroana akory ny voahangy sy ny vato krystaly, fa ny fahazoana fahendrena dia mihoatra noho ny voahangy.19 Ny topaza avy any Etiopia dia tsy azo ampitahaina aminy, ary tsy mahatakalo azy ny tena volamena tsara20 Dia avy aiza ary ny fahendrena? Ary aiza no fitoeran’ ny fahalalana?21 Miafina amin’ ny mason’ ny velona rehetra izany ary takona amin’ ny voro-manidina.22 Hoy Abadona [Abadona = Fandringanana] sy Ifahafatesana: Ny sofinay ihany no nandrenesany ny filazana azy.23 Andriamanitra ihany no mahalala ny lalana ho any aminy, ary Izy no mahafantatra ny itoerany;24 Fa Izy no mitsinjo hatramin’ ny faran’ ny tany ary mahatazana manerana izao ambanin’ ny lanitra rehetra izao,25 Ka manendry ny lanjan’ ny rivotra ary mamatra ny rano amin’ ny famarana.26 Raha nanao lalana ho an’ ny ranonorana Izy sy lalana halehan’ ny helatry ny kotrokorana,27 Dia nahita ka nanambara azy Izy; Eny, nanorina azy Izy sady namantatra azy;28 Dia hoy Izy tamin’ ny olona: Indro, ny fahatahorana ny Tompo no fahendrena. Ary ny fialàna amin’ ny ratsy no fahalalana.
JOBA 28.12- 28
NY TOERAN’NY FAHENDRENA SY NY FAHALALANA.
I Joba no sarin’ny olona tsy nivadika tamin’ Andriamanitra. Ny tenin’i Bildada sakaizany, nanambara taminy fa olona tsy tanteraka izy dia nasetriny izany ny hoe : tsy toy izany Andriamanitra, Tompon’ny fahendrena sy ny fahalalana. Ny fahafantarany ny fahendrena sy ny fahalalana ao amin’ny Tompo no nampifikitra azy Taminy
1-Tsy tratry ny saina ny fahendrena sy ny fahalalana satria an’Andriamanitra izany (and. 12- 22)
Endrika maro no itanisan’i Joba fa miafina amin’ny olona ny tena fahendrena amam-pahalalana. Tsy takatra ny tombam-bidiny (and.13), tsy eto an-tany no misy azy (and. 13) lehibe lavitra noho ny zava-tsarobidy ny lanjany ka tsy azo mora. Tsy misy zavatra mitovy lanja aminy eto an-tany ka tsy azo atakalo ny fisiany. Izany toerany izany no maneho fa ao amin’Andriamanitra irery no misy ny fahendrena sy ny fahalalana.
2-Anjaran’ny olona ny mikatsaka ny fahendrena sy ny fahalalana izay ao amin’Andriamanitra (and. 23- 28)
Andriamanitra no tompon’ny zavatra rehetra, izy no tompon’ny fahalalana sy ny fahendrena . Anjaran’ny olona no mitady izany ho azy mba hananany ny endrik’Andriamanitra. Atoron’Andriamanitra io lalana ahazoana fahendrena sy fahalalana io eo amin’ny and.28 ka azo atao ny mahazo izany amin’ny alalan’ny fahatahorana an’Andriamanitra sy fialana amin’ny ratsy.
Ahoana no atao hahazoana mifikitra amin’Andriamanitra ?
Hdriamanitra irery ihany ny voninahitra.Amen !
Teny mivohitra: Fahalalana, Fahendrena
Safidio Amosa (3) Apokalispsy (13) Asan’ny Apostoly (20) Daniela (7) Deotoronomia (13) Efesiana (9) Eksodosy (18) Estera (1) Ezekiela (14) Ezra (1) Filipiana (3) Fitomaniana (2) Galatiana (11) Genesisy (10) Habakoka (1) Hebreo (8) Hosea (2) I Jaona (7) I Korintiana (17) I Mpanjaka (3) I Petera (10) I Samoela (6) I Tantara (1) I Tesaloniana (5) I Timoty (3) II Korintiana (10) II Mpanjaka (5) II Petera (7) II Samoela (3) II Tantara (3) II Tesaloniana (2) II Timoty (6) Isaia (14) Jakoba (6) Jaona (35) Jeremia (13) Joba (5) Joda (1) Joela (2) Jona (1) Josoa (4) Kolosiana (6) Levitikosy (5) Lioka (25) Malakia (1) Marka (24) Matio (31) Mpitoriteny (2) Mpitsara (3) Nehemia (1) Nomery (5) Ohabolana (9) Romana (14) Rota (1) Salamo (24) Titosy (4) Zakaria (1)
jolay 2018 (4)